Tinotenda kuti muvhunzo.
Tiri Stainless simbi zvishongo mugadziri uye wholesaler, saka moq wedu USD 300, 3 hrs por kugadzira pa saizi.
Asi kana uchinyatsoda mharidzo kuedza, unogona kurayira USD 100 kanenge, kutumirwa mari iri pamusoro USD 30 1 kg.
Wish tinogona kuvaka zvebhizimisi uye ushamwari nani.
Tinogara tiine munhu paruoko kupindura mibvunzo yako. Tinotenda muna timeliness kuti vatengi, uye tichaita zvose zvinogoneka kugutsa vatengi vedu. Kana muine matambudziko, anoti, kana mazano, tapota nyorera nesu.
Nhengo Level: (accoring wako kuti mari, uchanakidzwa yakasiyana chechetere disccount)
Kana isu takagamuchira zvakawanda mirairo ose zuva, isu kuchinja vedu vanoshanda kwacho kuitira kupa nani basa makasitoma edu uye nechokwadi vatengi vedu vanogona kugamuchira zvirevo nenguva.
Inotevera vedu vanoshanda matanho matsva:
(Maererano Bejing Time)
1. ose mangwanani, nokuti zvose mirairo idzva vanobhadharwa kare asati 12:00 masikati, ticharamba kuzvironga uye tarisa Nehunde panguva iwoyo.
Kana kuti muripo pashure 12:00 masikati, ticharamba kuzvironga uye tarisa Nehunde zuva raitevera.
2. Kana wakagamuchira kurongedza list, kana iwe unogona kuita chokupedzisira muripo pamberi 6:00 pm, tinogona anotakura kubva hurongwa nenguva manheru.
Kana kuti muripo pashure 6:00 pm, tichava anotakura kunze uchitanga rakatevera.
3.For murayiro izvo vanobhadharwa kare, kana waita achiwedzera kuti ndakapedza nengaidzo pamberi 12:00 masikati, isu achakumutsirai wokupedzisira chiputiriso mazita panguva iyoyo manheru uye anotakura kunze uchitanga rakatevera.
Kana makaita achiwedzera kuti yokupedzisa nengaidzo pashure 12:00 masikati, isu acharonga kuti kuwedzera runyararo uye kutumira rwokupedzisira chiputiriso mazita zuva raitevera kuti iwe uye hurongwa achava anotakura shure mangwana.
Usati kuti murayiro, ndapota nomutsa kuronga nguva maererano ako ezvinhu.
Sorry chero zvivanakire kuti akaita kwamuri.
Kana muine mibvunzo, tapota inzwa wakasununguka kuonana nesu.
Paypal nhoroondo: julong@julongsteeljewelry.com
Tapota taura nesu usati kuti muripo nokuda kumadokero pamwe, kuongorora zita mugamuchiri wacho.
Bank Kutamisirwa Information
Munhu anoyamurika Bank Name: HSBC
zita kambani: Jinyun Trade Limited
Bank Account kwete. : 801406885838
munhu anoyamurika Bank: 1 Queen kwakaita Road Central, Hong Kong
KURUMIDZAI Code: HSBCHKHHHKH
We anotakura upi kero munyika.
Items akarayira kubudikidza nesu anotumirwa ne EMS kana TNT kana dhl kana FEDEX kana kupota.
We vachakutaurira pamwe club No. ne e-mail mangoti kuitira yako yakawanda ndokutumirwa patinowana kubva aiva kambani.
A Kero mumigwagwa runodiwa pakukurukura.
Merchandise achaiswa mureza Air-achitaura nemasuo, zvinotora inenge 3-5 kushanda mazuva.
Delivery nguva hadzirishandisi kugadzira nguva.
zvigadzirwa yedu yakawanda ndokutumirwa ose zuva, kubva Muvhuro kusvika Mugovera, kunze nemazororo. Zvinorayirwa Most akaisa pamusoro mevhiki chichange nengarava muna 2 kana 3 days, apo mirairo akaisa kwevhiki vachange nengarava zvinotevera Monday. Uchawana e-mail simbiso pamwe nhamba yako Tracking. maawa makumi maviri nemana pashure ukapiwa nhamba yako Tracking, iwe uchagona chamber hurongwa yako paIndaneti panguva
Delivery nguva zvinosiyana zvichienderana munyika kuenda.
jinyun chishongo anovaka hwakasimba tikabatana nezvose hombe ina kutumirwa makambani: dhl, nemateru, FEDEX uye TNT kupa nyanzvi yose pasuo nesuo pakusununguka.
Items chichange nengarava kubva inotevera zvebhizimisi mazuva waita zvazvakaipira. Kazhinji, zvingatora anenge 3-5 mabhizimisi mazuva pakukurukura, zvichienderana yakasiyana pakukurukura zvinoreva iwe sarudza. Hatina mhosva chakaipa kana undeliverable kero. Please nechokwadi chako kutumirwa kero akarurama uye deliverable.
We kubvumira kuti chamber hurongwa chako watinya ane mbeva. Kana ainge atumirwa wako kunosimbiswazve, muchapiwa nhamba iri club kwako nokusimbisa e-mail.
Zvicharamba kuzotora chinhu changu kusvika kwandiri?
Tapota cherechedza kuti mazuva ebhizimisi, dzakakudzingai Mugovera, Sunday uye Public Holidays, vari akaverenga nemashoko makurukuriro kumwedzi. Kazhinji, zvinotora inenge 3-5 mabhizimisi mazuva pakukurukura.
Ndingaitei chamber ainge atumirwa yangu?
We anotakura kutenga yako kuguma rakatevera mabhizimisi zuva pashure waita achiongorora-pamberi. We aizotuma e-mail pamwe Tracking nhamba saka unogona kumisa kufambira mberi ako panguva mutakuri 'Website.
Ndinofanira kuitei kana ainge atumirwa wangu haana anosvika?
Ndapota kubvumira kusvika 10 mabhizimisi mazuva kuti chinhu chako kununurwa. Kana zvakadaro asingadi anosvika, tapota kwatiri kuburikidza nekudzvanya kuti "Contact Us" bhatani pamusoro Website. Ticharamba kudzokera kwamuri nokukurumidza.